वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य समस्या को खोज र परिभाषा संग सुरु हुन्छ। भविष्यमा नाम को शब्द काम लेखनमा रेफरी, विरोधीहरूले, सलाहकार, विशेषज्ञहरु को विकल्प असर गर्छ। यो अनुसन्धान विषय तैयार कसरी भएकोले यो प्रक्रिया, लामो हुन सक्छ, यो सम्पूर्ण सञ्चालनको थप पाठ्यक्रम मा निर्भर गर्दछ।
छनौट एक विषय महत्त्वपूर्ण छ:
- लेखक को रुचि र क्षमता;
- अनुसन्धान विषय को सान्दर्भिकता;
- यो originality र चयन गरिएको विषय क्षेत्रको नवीनता।
अनुसन्धान कुनै पनि प्रकारको मा अनुसन्धान विषय को सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि क्षेत्र को सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष: वस्तु संग Familiarization तुरुन्तै महत्व र आधुनिक संसारमा एक विशेष वैज्ञानिक बुद्धि को महत्त्व स्पष्ट विचार दिन्छ।
सफाइ गर्ने सान्दर्भिकता को अनुसन्धान मा परिचय, जो एक महत्वपूर्ण भाग को थियोसिस, मास्टर गरेको, प्रबंध काम। यो सबै आधारभूत योग्यता विशेषताहरु समावेश गर्दछ।
परिचय को सुरुमा विषय यसको थप अध्ययन रूपमा सेवा जो छान्नुभएको थियो किन व्याख्या गर्न संक्षिप्त, तर अर्थपूर्ण हुनुपर्छ।
सामान्य मा, प्रगति वैज्ञानिक अनुसन्धान को यस्तो अनिवार्य कदम भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
1) अनुसन्धान विषय को जोडतोडले।
2) लक्ष्य र कार्यहरू राख्नुहोस्।
3) वस्तु र विषय निर्धारित।
4) अध्ययन को विधिहरू चयन गर्नुहोस्।
5) एक प्रक्रिया वर्णन।
6) परिणाम छलफल गर्न।
7) सामाग्रीहरु निष्कर्ष र परिणाम को मूल्यांकन।
अध्ययन को वस्तु को उपाधि र dissertations दायरा ठूलो महत्व छ। वर्तमान रुझान को दृष्टिकोण र यसको परिपक्वता र प्रशिक्षण को वैज्ञानिक प्रमाण सामाजिक महत्त्व देखि आकलन गर्न विषय सही, स्पस्ट बोल्नु् यो चयन गर्न ठीक लेखक को क्षमता।
"उत्पादन वा ज्ञान को के क्षेत्र मा, परिणाम द्वारा प्रस्तावित गर्न आवश्यक के र कसले लागि: अन्यथा, महत्त्व बताए, हामीले निम्न प्रश्न तैयार गर्न सक्नुहुन्छ? यो आवश्यकता यी प्रश्नहरूको जवाफ छलफल गर्न किन? ", हामी सान्दर्भिक तैयार गर्न सक्नुहुन्छ।
अवस्थित ज्ञान र परिणाम अप्रचलित जब समस्या खडा, र नयाँ बाँचे छैन। विश्वसनीय अनुसन्धान डाटा को एक किसिम मा आधारित यसको समाधान प्रदान गर्न - त्यसैले, सिद्धान्त वा व्यवहार मा असंगत समस्याग्रस्त अवस्था भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ, र आदर्श देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा को घटना एक निश्चित बिन्दु कुनै पनि अवस्थित सिद्धान्त मा फिट छैन कि तथ्य गर्न अज्ञात को खोज को कारण हुन्छ।
को सान्दर्भिकता विवरण लागि आवश्यकताहरू
- अनुसन्धान विषय को सान्दर्भिकता वर्णन, तपाईं verbosity र अस्पष्टता जोगिन आवश्यक छ। केही वाक्य यसलाई Suffice खोज्नुभयो गरिनेछ जो मिसन, को सार व्याख्या।
- एक वैज्ञानिक समस्या formulating, यो महत्त्वपूर्ण माध्यमिक देखि प्राथमिक अलग छ।
- तेज र रोचक एकै समयमा एक क्षणिकताबारे गर्नेहरूलाई गर्न वेवास्ता वर्ण (यसलाई राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी भाषणले को क्षेत्र आउँछ)। के आज लोकप्रिय र सबैको ओठमा छ, भोलि यसको सान्दर्भिकता गुमाउन सक्छ। यो वैज्ञानिक प्रक्रियामा अप्रिय समस्या धेरै कारण हुनेछ। र सबै को पहिले सान्दर्भिकता को डिग्री असर गर्छ।
टम्स्क शैक्षणिक विश्वविद्यालय (टम्स्क राज्य शैक्षणिक विश्वविद्यालय): संकाय, भर्ना, ठेगाना
कृषि एकेडेमी (समारा): विभागको संरक्षित, एक पारित स्कोर
परिचय - यो के हो? जनावर र बिरुवाहरु को परिचय। संगीत परिचय
संस्थान - यो के हो? अर्थ र परिभाषा
एपिलेशन र कपाल हटाउने: फरक के? सही विकल्प
गेरानियम: घर, घर मा लाभ र geraniums को हानि राख्न सम्भव छ
"Diphenhydramine": के मद्दत गर्छ, प्रयोगको लागि निर्देशन
ल्यापटपमा टचप्याड कसरी अक्षम पार्ने? विशेषज्ञहरूबाट केही सुझावहरू
"Fokusin": प्रयोगको लागि डाक्टर, contraindications समीक्षा र निर्देशन
के "lol" गर्छ? का साथ हेरौं!
ठूलो अमेरिकी Eleonora Ruzvelt